downloads 15 184
Airbus A320-211 Air Canada. One repaint na a dị mfe ma dị irè panel. -Ada nnọọ mma.
Air Canada (Na obodo ntà: AC, ICAO code: ACA) bụ mba ụgbọelu nke Canada. Ọ na-arụ ọrụ anụ ụlọ na mba na flights na ise, si ya ehiwe na Toronto Pearson, Montreal-Trudeau, Vancouver na Calgary. Air Canada bụ 13th kasị ibu ụgbọelu na ụwa. Na 2008 ọnụ na ya Regional Airline Air Canada Jazz, ọ bụkwa 33 nde njem, ọrụ 1,370 ndokwa flights kwa na ya n'ọrụ 24,700 oge ọrụ n'oge nile nke world2. Ya n'isi ụlọ ọrụ na-dị na Montreal, ke enye ama mwepụ site n'obodo Winnipeg, Manitoba na 1949. Ọ bụ a tọrọ ntọala so Star Alliance. (Isi Wikipedia)
Onye edemede: Nik Trathen